Izenzo ze-MCP - Izenzo ze-Photoshop kanye ne-Lightroom Presets | Izenzo ze-MCP ™
Mayelana Nezenzo ze-MCP
Isinqamuleli sakho sezithombe ezingcono
Izenzo zeNewborn Photography Photoshop
Izenzo ezibalulekile ze-Photoshop
Ukuthinta kabusha Izenzo ze-Photoshop
Ukuqedela Izenzo ze-Photoshop
Izenzo zobuciko ze-Photoshop
Izinqwaba zesenzo se-Photoshop
Ukuhlelwa kabusha kwe-Lightroom
Izinqwaba Zokusetha Ngaphansi Kwe-Lightroom
Ukuqeqeshwa Ngezithombe Namathuluzi Okufunda
Amabhodi Wezindaba nezifanekiso
Ama-Props kanye ne-Prop Guides
Okokufundisa kwamavidiyo wamahhala kokuthatha izithombe nokuhlela
Sebenzisa ama-az, AZ, 0-9 kuphela, udwi nokudwebela phansi.
Izenzo ze-MCP ™ Amathuluzi WOKUHLELA NOKUFUNDA KWABASEBENZI ABAQALA IZITHOMBE
Izenzo ze-Photoshop, i-Lightroom Preset, i-Overlays, ne-Textures
Vumela i-MCP Actions ™ isize ukuthuthukisa ukuthwebula izithombe nokuhlela kwakho namuhla!
Imikhiqizo ye-MCP ifakwe ku:
IZITHOMBE ZETHU ZOKUTHENGISA KAKHULU ZESITHOMBE Izenzo zethu ze-Photoshop zisize abathwebuli bezithombe ukuthi bakhe izithombe ezingcono kusukela ngo-2006.
Ngokuchofoza inkinobho, i-MCP Actions ™ Premium Photoshop Actions izokusiza ukuthi ufeze izithombe ezibukhali, ezinemibala egqamile, ukuguqulwa okucebile okumnyama nokumhlophe, izithombe ezilungiswe ngombala nezithombe zokuvuna ezicutshungulwe ngobuciko. Isenzo sethu esisha esisethiwe, i- I-Makeup Toolkit Premium Photoshop Action ikunika amandla okusebenzisa noma yiluphi uhlobo lwezimonyo kusihloko sakho, kunoma imuphi umbala!
Izenzo zethu zebhodi lezindaba ezintsha nezenzo zethempulethi zakha iwebhu noma ziphrinte ama-collage asezingeni bese zifaka izithombe zakho ngemizuzwana. Ngaphezu kokunikeza isinqamuleli ekuhlelweni kwesithombe, sikubeka ekulawuleni. Ngokulungiswa kwethu ngokuphelele Izenzo ze-Photoshop, ungenza ngokwezifiso imiphumela yokubukeka okulingana nomkhiqizo nebhizinisi lakho.
Iqoqo lama-Essentials: Iphakheji Yezenzo ze-Photoshop
Konke okudingayo ukuze uqale ukuhlela ku-Photoshop. Le Phakheji Ifaka phakathi 3 of the Okubaluleke Kakhulu Photoshop Izenzo MCP ™ kufanele Nikeza. Inketho enhle uma usaqala ukuhlela izithombe ku-Photoshop.
BUKA LO Mkhiqizo
Ama-MCP Actions ™ Originals: Inqwaba Yezenzo ze-Photoshop
Thola konke okuqala okuthengiswa kakhulu Amasethi Esenzo se-Premium Photoshop I-MCP Actions ™ kufanele inikele. Ngempela, izinkulungwane zezenzo kumasethi angu-14 esewonke zifakiwe kule nqwaba. Kuhle kakhulu ngomthwebuli wezithombe okufanele abe nakho konke.
Inqwaba Yesenzo se-Photoshop Seasons Esine se-MCP
Kusukela ekuseni okunenkungu entwasahlobo kuya ekushoneni kwelanga kwehlobo kwegolide, isizini ngayinye inika umuzwa wayo ohlukile ezithombeni zakho. Ngalesi sigaxa, ungakwazi shesha ukuhamba komsebenzi wakho ngenkathi engeza umuzwa ofanele wesizini kuphela ezithombeni zakho.
Thenga zonke izenzo ze-Photoshop
IZIMPAHLA ZETHU ZOKUTHENGISA KAKHULU Hlela izithombe zakho ngama-presets wethu we-Lightroom we-premium ukuze wakhe ngokushesha futhi kalula imisebenzi emangazayo yobungcweti.
Noma ngabe ungumthwebuli wezithombe omatasatasa noma umentshisi onomdlandla, ukuhlela amakhulu noma izinkulungwane zezithombe kudinga isikhathi ongenaso nje. Okwethu Ukuhlelwa kabusha kwe-Lightroom beka izinkulungwane zokubukeka okuyingqayizivele ezandleni zakho - konke kungokwezifiso ngokuphelele futhi kuyabuyiselwa emuva ngo-100%. Okuhle kunakho konke ungabeka ukusetha kwethu ngaphambilini. Kusukela ekulungisweni kokuvezwa okulula kuya emiphumeleni emibi yasedolobheni, ukusethwa kwethu kwe-Lightroom kunakho konke okudingayo ukudala imiphumela oyifunayo. Khetha kusuka kumbala ogqamile, amadolobha acubungulwe kahle, ukuvuna kanye ne-haze, okuhle okumnyama nokumhlophe nokuhlelwa kwasefilimu. Hlela ngendlela engonakalisi i-RAW yakho noma izithombe ze-JPG: yakha kusuka ekuvezeni ibhalansi emhlophe, bese uqedela ngokugcwalisa i-flash, umehluko, ozimele nokuningi. Okwethu Ukuqoqwa Okuchofoza Okusheshayo futhi Khanyisa ukusetha kwangaphambili ube nakho konke!
Futhi uma usukulungele ukubonisa izithombe zakho kuwebhu noma ukuzethula ukuze ziphrintwe, uzothanda okwethu Ukuhlelwa kwesifanekiso se-Lightroom nama-Storyboard Presets. Benza le misebenzi ecindezela umoya.
Ukuhlelwa kabusha kwe-Quick Clicks Collection ™ Lightroom Presets
Ukuhlelwa kabusha kwe-Lightroom okungama-300 komthwebuli wezithombe ngokuhlukahluka nokuguquguquka cishe kwazo zonke izimo zokudubula. Izinkulungwane zokubukeka okuyingqayizivele ezandleni zakho - konke eyenziwe ngokwezifiso ngokuphelele futhi i-100% ibuyiselwe emuva.
Iqoqo eliphelele le-Lightroom Presets Bundle
Kufaka phakathi iqoqo elikhulu lakho konke ukuhlela kwethu kwe-premium, ukuhamba komsebenzi, nokuhlelwa kabusha kobuciko be-Lightroom - Konke ukusethwa esake sakwenza kwaba izikhwama kumkhiqizo owodwa. Yilokho Ukusethwa okuphelele okungu-1470 kungaphezu kwesaphulelo esingu-80%!
Khanyisa ™ Lightroom Preset
I-MCP Enlighten ™ ifaka phakathi Ukuhlelwa kabusha kwe-Lightroom okungama-200 komthwebuli wezithombe ihlukaniswe ngezinyathelo ezine okulula ukuzisebenzisa kanye neqoqo le- Ukuhlelwa kabusha kwebhulashi okungama-30 ukunakekela wonke ama-tweaks amancane owawungazi ukuthi ungawenza eLightroom.
Thenga konke okulungiselelwe kwangaphambili kwe-Lightroom
IMITHOMBO YETHU ETHENGISA KAKHULU YOKUTHENGISA IZITHOMBE Faka idrama ezithombeni zakho ngemidwebo ecacile, izithunzi ezinhle, izulu elihle eliluhlaza okwesibhakabhaka, ukukhanya kwelanga, ukuqhuma kwelanga, nokunye okuningi.
Imidwebo nokumbondelana ye-Photoshop ne-Photoshop Elements amafayili wesithombe anokulungiswa okuphezulu, okwenziwe ngesandla. Akuzona izenzo futhi akukho okuzofakwa. Ziyindlela elula yokwenza ngcono izithombe ku-Photoshop noma ku-Photoshop Elements ngokusebenzisa ama-Layers. Ngokuyinhloko uwahudulela esithombeni, ulungise imodi yongqimba yawo, bese wenza izinguquko ezincane ukuze zilungele ukunambitheka kwakho.
Ukumbondelana kwelanga kwe-Photoshop nama-Elements
Ukumbondelana kwelanga kuqukethe Izimbondela ezingama-premium ezingama-75 ye-Photoshop ne-Elements ukuze engeza ilanga ezithombeni zakho, ngisho nasemazulwini angafuni. Faka ama-sunbursts, imisebe yelanga, imiphumela ye-bokeh, nokuningi.
Ukubhanqwa Kwangemuva Kwesibhakabhaka kwe-Photoshop ne-Elements
Imbondela Yesendlalelo Sezulu iqukethe Izithombe ezingama-85 zokucaca hi ukufaka ngokushesha futhi kalula isibhakabhaka nokuhlanganisa umbala kunoma yiziphi izithombe zakho zangaphandle. Shintsha isibhakabhaka esingaqondakali sibe yisibhakabhaka esihle esiluhlaza okwesibhakabhaka. Faka amafu noma ngisho nokushona kwelanga.
Izimbondela Zokudlala Kwezingubo ze-Photoshop nama-Elements
I-MCP Actions ™ Texture Play Overlays isethi ifaka phakathi Imidwebo yokuthungwa eyingqayizivele engama-75 ukwengeza ukujula okusheshayo nedrama ecacile ezithombeni zakho. Ithoni. Pop it. Ithumele umbhalo. Zijabulise kancane ngezithombe zakho ku-Photoshop noma ama-Elements!
Thenga wonke ama-Textures nama-Overlays
UKUBUYEKEZWA KWANGEMPELA KWAMAKHASIMENDE OKWANGEMPELA E-MCP
I-Adobe ™ yenza ukuhlela kube nokwenzeka. I-MCP ™ yenza kube lula.
"Izenzo zakho nokulungiselela kwakho kwenza impilo yami ibe lula kakhulu! Ngishaywa umoya yimiphumela, ingongela amahora amaningi wokuhlela, futhi ingenza imali! '
"I-MCP yenza ukuthi izithombe zami ziphile. Ibhizinisi lami seliphindaphindwe kathathu selokhu ngaqala ukusebenzisa izinto enizilungisile, futhi ngingumthwebuli wezithombe othembekile."
"Izenzo ze-MCP ngunkulunkulukazi wami wezithombe. Unginike ukuzethemba namathuluzi engiwadingayo ukuze ngisebenze ngobuhlakani futhi ngiveze izithombe ezinhle."
"Bengijuluka ngakho konke ukuhlela isithombe obekufanele ngikwenze. Manje, ngenxa ye-MCP Actions ™, sengikwazi ukuhlela izithombe zami ngokushesha. Okuhle kunakho konke, nginesikhathi sami sokuphumula ngibuyele emuva!"
Izenzo ze-MCP ™ zenza ukuhlelwa kube mnandi, kusheshe, futhi kube lula kubathwebuli zithombe abangochwepheshe nabathandwayo. Zethu kahle, ukuhlolwa kwe-Photoshop Actions futhi Ukuhlelwa kabusha kwe-Lightroom thuthukisa izithombe zakho. Amakilasi ethu okuqeqesha online kanye izifundo zevidiyo zamahhala zabathwebuli zithombe zenzelwe ukukufundisa i-Photoshop, i-Elements, ne-Lightroom. Bona ukuthi singasiza kanjani izithombe zakho zigqame ngenkathi sikongela isikhathi.
BHALISA KUHLULELO LETHU LOKUTHUTHA LWEZINDABA
Thola ukulethwa kwe-MCP ™ ebhokisini lakho lokungenayo. Ngokuthola izipesheli zakamuva, izexwayiso zokulanda mahhala namathiphu amahle nokufundiswa kwabathwebuli zithombe, bhalisela i-newsletter yethu yamasonto onke engezansi.
Ufuna sikusize? Vula ithikithi lokuxhaswa.
I-MCP Actions ™ isiza abathwebuli bezithombe abangochwepheshe nabasebenza ngokuzilibazisa ukuthi bathuthukise izithombe zabo. Izenzo zethu ezintsha ze-Photoshop kanye ne-Lightroom Preset zenza ukuhlelwa kwesithombe nokuthinta kabusha kusheshe futhi kube lula. Izenzo ze-MCP ™ zinikela ngamakilasi wokuqeqeshwa aku-inthanethi asebenzayo kanye nezifundo zamahhala ze-Photoshop zevidiyo. Bona ukuthi singasiza kanjani ukuthwebula izithombe zakho kugqame ngenkathi sikongela isikhathi.
Chofoza ukuze uthole ukusekelwa
Khombisa futhi utshele
Thenga Zonke Izenzo Zokuhlela I-Photoshop
Amasethingi Ahlanganisiwe we-Photoshop Action
Thenga Konke Ukuhlelwa Kwe-Lightroom
Amasethingi Ahlanganisiwe we-Lightroom
Izenzo zamahhala ze-Photoshop, i-Lightroom Preset, namathuluzi wokuhlela
© 2019 Izenzo ze-Photoshop kanye ne-Lightroom Presets | Izenzo ze-MCP ™. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Iwebhusayithi inikwe amandla yi- Zen